हेलोवीनका लागि आफ्नै आफ्नै हातमा शिल्पहरू: सबै संतकालीन दिनको वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्
हेलोवीन हाम्रो देशमा आधिकारिक छुट्टी छैन। तथापि, यस दिनको उज्ज्वल लुगा र यस दिनको चौंकानेचोटि सहभागीहरूले रुसीलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। नोभेम्बरको रातिमा धेरै र अधिक मानिसहरू राक्षसहरू वा भूत पहिरनहरूमा लुगा लगाउँछन्, र कद्दिन लैंपसँग घरहरू र अपार्टमेन्टहरू खिचिएका छन्।
पसलहरू त्यस्ता उत्सव विशेष गुणहरूको प्रस्ताव गर्छन्, तर यो धेरै रमाइलो (र सस्ता) हो जुन हेलोवीनका लागि आफ्नै हातहरू छन्। साथै, तिनीहरूमध्ये धेरैले विशेष सामग्री वा कलाहरू आवश्यक पर्दैन।
"पछिवार" को शैलीमा पार्टीहरूका लागि तपाईले केहि विषयगत गजम सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। हेलोवीनका लागि आफ्नै आफ्नै हातमा शिल्पहरू शाब्दिक रूपमा केहि घण्टामा सिर्जना गरिन्छ, र त्यसपछि वार्षिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब सम्म तपाइँ नयाँ कुरा गर्न चाहानुहुन्छ।
ग्यालल्याण्डको रूपमा सरल सजावट कोठामा तुरुन्तै परिवर्तन हुनेछ। यसलाई पर्खालबाट पर्खालको रस्सी वा रिबन खिच्न र यसलाई घरको भूतमा सजावट गर्न पर्याप्त हुन्छ, किनभने वातावरण तुरुन्त असीम र रहस्यमय हुनेछ। अनावश्यक भावना सिर्जना गर्न, तपाईंलाई कुनै पनि सेतो कपडाको स्क्वायर चाहिन्छ। टाउकोको आधारको रूपमा, पेपरको पाना प्रश्न गर्नुहोस्, ढक्कन गोलाकार आकार दिन्छ। कपडाको चौडाईमा राख्नुहोस्, लिपि गर्नुहोस् र यसलाई "गर्दन" मा धागा बनाउनुहोस्। त्यो सबै हो। यो केवल एक जोडी आँखा वा अशुद्ध मग आकर्षित गर्न बनी रहन्छ। त्यहाँ एक विकल्प पनि सजिलो छ - भूत कागजको पट्टीबाट काट्न सकिन्छ, पूर्व-अनुकूलित accordion। Garland को लागि एक आधार को रूप मा, अन्य हेलोवीन प्रतीक पनि प्रदर्शन गर्न सक्छन्: कद्दू, बिल्लियों या मकड़ी।
अलग पर्खने भूतहरू बनाउनको लागी पनि गाह्रो छैन: केवल एक सानो बल, धुज र PVA को टुक्रा आवश्यक हुनेछ। कपडा गोंदमा भिजेको छ र कुरकुरा हुन्छ। त्यस पछि, यो कुनै जार वा बोतलको गर्दनमा झन् झण्डामा राखिएको छ। डिजाइन स्थिर हुनुपर्छ। सुन्दर चाँडै भुजले सुत्न पाउनेछ, जसलाई दिइयो। ए वा बोतल हटाइयो, एक तयार गरिएको भूत कोठाको कुनामा पतली स्ट्राइक (माछा) लाई लुकाउन सकिन्छ। यदि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् भने, तिनीहरू अझ रोचक देख्छन्।
हेलोवीनका लागि बल्क कागज शिल्प
कागजबाट, तपाईं दुई-आयामी मात्र होइन, तर तीन-आयामी शिल्प मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी, कद्दू - हेलोवीनको मुख्य प्रतीक - कार्यान्वयनका थुप्रै संस्करणहरू छन्। यसलाई बनाउनको लागि सबै भन्दा राम्ररी तरिका कागज बाट गोंग गर्न हो। यो छिटो र बच्चाहरु लाई पनि सक्षम छ।
त्यसकारण, तपाइँ हेलोवीनका लागि बच्चाहरूसँग पहिले नै यो थाहा पाईन्छ कि कसरी कैंची प्रयोग गर्न वा कम से कम गोंग तयार स्ट्रिपहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कद्दू राउन्ड वा फ्ल्याट हुन सक्छ, किनकि दुबै रङहरू रङ रङको रंग रङका लागि आवश्यक पर्दछ।
स्ट्रिप्स को मोटाई, उनको लम्बाई, आकार र पत्ते को उपस्थिति सबै हेलोवीन को लागी यस्तो शिल्प बनाउन को लागी निर्णय को सबै मा हो। आफ्नो हात संग, तपाईं केवल कोठा को सजाने, तर पार्टी को मेहमान को लागि स्मृति चिन्ह पनि बनाउन सक्दैन - सानो पेंडेंट-कद्दू।
हेलोवीनका लागि शिल्प शिल्प गर्नेहरूलाई थाहा पाउन निश्चित हुनुहोस्: ब्याट सँधै काममा आउँछ जहाँ यो सबै रहस्यमय र अल्पसंख्यक हुन्छ। यी बिल्लियों को एक बगाल तुरुन्त एक पुरानो घर को एक छोडिएको छत को वातावरण बनाउँछ।
एक ब्याट गर्न को लागि सबै भन्दा आसान तरीका कालो कागज वा केहि समान सामाग्री हो: गत्ता, कृत्रिम छाला, फोमिरन। कोठा मा पिशाचिंग स्थिति ह्याप भन्दा राम्रो छ - यति विश्वसनीय।
मोमबत्ति र मोमबत्तीहरू
"हेलोवीन" को विषय मा शिल्पहरू मात्र विशुद्ध सजावटी हुन सक्छ, तर पनि कार्यात्मक। त्यसोभए, मोमबत्तिहरु, सजावट को ध्यान मा राखयो छुट्टी को अद्वितीयता, साल को सबै भन्दा भयानक रात मा प्रकाश को मुख्य स्रोत बन जाएगा। तिनीहरू एक्रिलिक प्यान्टको साथ चित्रित गर्न सकिन्छ, कद्दू, भूत वा राक्षस चित्रण गर्दछ। र मोमबत्तिले सरल ग्लास गिलासबाट बनाउन सजिलो छ, जस्तै कि यो चित्रित हुन्छ।
कद्दू टाउको बिना कस्तो किसान हेलोवीन, आफ्नै अनौठो मुस्कानलाई कता कता? कसैले यसलाई वास्तविक सब्जीबाट बनाउन सक्छ। यो एक कद्दू, एक चाकू र सानो विकृति चाहिन्छ। फल को बीच हटाइएको छ कि शेष तह 1.5-2 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि धीरे आँखा, नाक र मुखमा छेदहरू काट। तपाईंको मूडको आधारमा, तपाईंको अनुहार अभिव्यक्ति बिल्कुल केहि हुन सक्छ। यो केवल टाउको भित्रको स्रोत घुम्न छोडिन्छ, सबै भन्दा राम्रो, एक ब्याट्री संचालित संचालित लालटेन।
जब हेलोवीनका लागि हस्तशिल्प तयारी गर्दै, तपाइँ आफ्नो हातमा पोशाक तत्वहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि, एक चुड़ैल पार्टीको लागि एक हूड वा दुष्ट जादुरीस को पोशाक। यसमा एक फ्लैट रिंग (एक चक्र, बीचमा छेद संग, हेडको साइजको तल) र एक कोन। दुवै मोटो गत्ता, डाई कालो र गोंद सँगै काट्न सजिलो हुन्छ। साथै एक सूपबाट सूखी शाखाहरू र ढोकाबाट यो डाइच-पोमोलोको गाडी बनाउन सम्भव छ।
र केहि ...
हेलोवीनका लागि पेपर बनेका शिल्पहरूको बारेमा तपाई के सोच्न सक्नुहुन्छ? हो, कुनै! तपाईंको आँखामा पाउने हरेक वस्तु हेलोवीनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर डिस्कहरू भूत, शैंपोबाट बोतलहरू - पिशाचमा बदलिन्छन्, एक कचरा बाबा यगाको स्टोपामा हुन सक्छ। सबै प्रकारका राक्षसहरु सिलाई गर्दै छन्, बुनाई, plasticine देखि मोल्डिंग। यो प्रतीक बेकारको कुरामा संलग्न हुनाले आफैलाई धेरै नयाँ प्रतिभाहरू पाउन सक्छ।
र हेलोवीनका लागि शिल्पहरू सिर्जना गर्नाले सामान्यतया एक पूर्ण खुशी हो। तिनीहरू दुःखी पात्रहरू सिर्जना गर्न धेरै खुसी हुन्छन्, कि प्रक्रियामा तिनीहरू तिनीहरूबाट डराउँछन्।
घरको अवस्थामा प्रजनन
एल्यूमीनियम नालीदार: प्रकार, विशेषताहरु, स्कोप
लाडा प्रोरा वगन - साना पैसाको लागि महान अवसर
फलाम को छनोट। के फलाम राम्रो?
Episcleritis आँखा: लक्षण, कारण, उपचार
संसारको सबैभन्दा उच्च क्यालोरी खाना
रसायन कसरी उपयोगी लामो कपाल मा?
पर्खाल रोशनी sconces चयन
म्यूनिख रेस्टुरेन्ट: गएर लायक केही स्थानहरू
ईवा सामाग्री - यो के हो?
एक मास्टर वर्ग: एक शर्ट एउटा ओरिगेमी टाई कसरी बनाउने